Rakesh Roshan Oo Hambalyo U Diray Wiilkiisa: “Hrithik Wuxuu Sameeyey Wax Aanan Sameyn Karin - Warkii.com-News and information about Somalia
Rakesh Roshan Oo Hambalyo U Diray Wiilkiisa: “Hrithik Wuxuu Sameeyey Wax Aanan Sameyn Karin
Hrithik Roshan waa maalintiisa wuxuuna u dabaaldegayaa sannad guurada dhalashadiisa 43aad, aabihiisa Rakesh Roshan ayaana maanta qiireysan waana wax la iska fahmi karo maadaama ay tahay maalin u gaar ah wiilkiisa.
Rakesh oo wareysi siiyey saxaafadda ayaa sharraxaad ka bixiyey sida uu Hrithik u yahay wiil special ah ah kaasoo rumeeyey riyo kasta oo uu lahaa aabihiis.
Rakesh ayaa u sheegay saxaafadda: “Xaqiiqadu waxay tahay inuu Hrithik si adag u shaqeeyey. Aniga ahaan waxaan ku guuldarreystay riyadeydii aheyd inaan atoore noqo. Laakiin sida waalidkeey oo kale, waxaan doonayey inuu wiilkeygu ii rumeeyo riyadaas oo uu noqdo jillaa weyn.
“Sidaas darteed, Hrithik wuxuu sameeyey waxyaabo aan anigu sameyn waayey nolosheyda oo dhan. Waa superstar, waxaana ku dayda jillaayaal badan oo adduunka daafihiisa ah.
“Laakiin sidoo kale waa wiilkeyga, wuxuuna iga dhigay aabe ku faraxsan waxa uu wiilkiisu sameeyey. Wuxuu gaaray guulo waa weyn, waxaa soo wajahay guuldarrooyin intii xirfaddiisa lagu jiray, waana dareensanahay inay yihiin waxyaabo markasta dhici lahaa sababtoo ah haddii uusan qalad gelin marnaba waxba kama baran doono shaqada jilliinka”.
Rakesh iyo wiilkiisa Hrithik waxay la imaan doonaan filimkooda Kaabil ee tiyaatarrada loo saari doono 25ka bishaan Janaayo waxayna tartan la geli doonaan filimka Raees ee Shah Rukh Khan.